AirTags waxay ku kici kartaa $ 39 cutubkiiba | Waxaan ka socdaa mac
AirTags waxay ku kici kartaa $ 39 cutubkiiba
AirTags, waa aalad aan cidina arag marka laga reebo Prosser….
Mid ka mid ah doodaha aan ka qabaneyno warbaahinta gaarka ah waxay ku saabsan tahay jiritaanka ama maahan AirTags. Kuwani Apple AirTags ayaa lagu xamanayay shabaqa muddo dhowr sano ah, laakiin weligood si rasmi ah uma iman. Xitaa ka 9To5Mac hadda waxaan aragnay xanta ka socota Max weinbach taas oo uu ku sheegay in kuwan qiimahoodu waa $ 39 cutub.
Turjumida kuwan $ 39-ka ah ee yuuro waxay noqon kartaa geesinimo iyadoo la tixgelinayo waxa ku dhacay miniPod mini, tusaale ahaan. Laakiin way iska cadahay in AirTag-yadaani ay suuqa ku gaari doonaan qiimo sida ugu macquulsan loogu hagaajiyo gudaha "margin" ee shirkadda Apple lafteeda.
Waxaa sidoo kale la sheegay inay yeelan karaan naqshad runtii aad u yar xitaa ka yar Tile Pro, kuwaas oo ka badan ama ka yar isla aaladda aan ka filan karno AirTags. Runtu waxay tahay in nashqad yar ay ka caawin doonto qaadista AirTagyadan meel kasta, runtiina waa dhab ahaan waxa ay yihiin, si loogu qaado iyaga oo lagu qarinayo furayaasha, boorsada jeebka, iwm.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan AirTags-kan ayaa ah in sida lagu sheegay warbixino kala duwan waxay isticmaali karaan qalab kasta oo Apple Bluetooth karti u leh si ay booskooda u siiyaan daqiiqad ah, toos ula xiriir si aad u fuliso shaqada goobta. Waxaas oo dhami runtii way fiican yihiin laakiin xitaa waxaan ku aragnay iyaga oo ku jira macruufka kumbuyuutarka oo mar dambe lama aqoon, taas oo ah, inay yihiin wax soo saar ka imanaya xanta muddo aad u dheer imaatinkiisana aan hadda la xaqiijin. Waxaan sugi doonaa waqti dheer si aan u aragno waxa ku dhacaya iyaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » AirTags waxay ku kici kartaa $ 39 cutubkiiba
Apple Watch ma u tahay isboorti xad dhaaf ah? Bloomberg ayaa leh haa
WatchOS 7.3.3 oo hadda lagu sii daayay sharooto amniga ah